ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကို ခေါင်းလျှော်ပြီးမှ သုံးရမှာလား? ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ သုံးရမှာလား? - Lifestyle Myanmar
ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကို ခေါင်းလျှော်ပြီးမှ သုံးရမှာလား? ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ သုံးရမှာလား?
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ကောင်းခြင်းငါးဖြာမှာ ဆံကေသာရဲ့ ကောင်းခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဆံကေသာကောင်းဖို့ဆိုရင် ဦးရေပြားနှင့် ဆံသားက ကျန်းမာသန်စွမ်းနေမှ ဖြစ်မှာပါနော်။ ဒီလိုကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ပုံမှန်ဆံပင်ပေါင်းတင်တာကလည်း အဓိကကျပါတယ်။ ဆံပင်ပေါင်းတင်ခြင်းကနေ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံကေသာ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေရရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့က ဆံပင်ကို ရှန်ပူနှင့် လျှော်ပြီးမှ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကိုသုံးကြသလို တချို့တွေက ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေး သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ဘယ်နည်းလမ်းက မှန်ကန်သလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးမှ သုံးရမှာလား? ခေါင်းမလျှော်ခင် သုံးရမှာလား? ဆိုတာသိစေဖို့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကို လိမ်းသလဲ?
ဖုန်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာ ပုံမှန်စုပုံနေတတ်ပြီး အဲ့ဒီဖုန်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေဟာ အစိုဓါတ်နဲ့ အာဟာရတွေ ဦးရေပြားအတွင်းထဲကို စိမ့်ဝင်လို့မရအောင် ဆံချည်မျှင်တစ်ဝိုက်ကို အတားအဆီးဖန်တီးပေးပါတယ်၊ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်က ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အစိုဓါတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့နှင့် ဆံကေသာပျက်စီးမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ဖြစ်တာကြောင့် တခြားဘာ product မှမလိမ်းခင် sebumနှင့် ဖုန်အမှိုက်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ဆံကေသာကို သေသေချာချာသန့်စင်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ရေနွေးနွေးလေးကိုသုံးပြီး သင့်ဆံပင်တွေကို လျှော်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဆံပင်ကပိုလျှံနေတဲ့ အစိုဓါတ်တွေကို ညှစ်ထုတ်ပြီး လေဖြင့် ခြောက်အောင်ထားပါ။ နည်းနည်းခြောက်သွားပြီဆိုရင် ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကိုလိမ်းပေးပါ။ ဒါက ဆံပင်အပေါ်ယံအလွှာ အကြေးခွံ cuticles ကိုပွင့်စေပြီး ဆံပင်ရဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေရရှိနိုင်စွမ်းကို တိုးစေတာကြောင့် ဆံပင်ပေါင်းမတင်ခင် ရေနွေးနွေးဖြင့် လျှော်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုလိမ်းမလဲ?
စနစ်တကျ ဆံပင်အခြောက်ခံပြီး သင့်ဆံပင်ကို အပိုင်းခွဲပါ။ ဆံပင်အဖျားတွေက ပိုပြီးပျက်စီးတတ်တာကြောင့် ဆံပင်အဖျားတွေပေါ်မှာ ပေါင်းတင်ဆေးကို ပိုပြီးလိမ်းပေးပါ။ အသွားကျယ်ကျယ်ဘီးကိုသုံးပြီး ပေါင်းတင်ဆေးကို အညီအမျှနှံ့စပ်အောင် လိမ်းပေးပါ။ ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ၁၀-၁၅မိနစ်လောက် ထားပေးပါ။ ပြီးမှခေါင်းလျှာ်ပါ။ ဆံပင်ပေါင်းတင်တဲ့အခါ ပိုပြီးရလဒ်ကောင်းဖို့ ရေနွေးငွေ့ ကုသမှုကိုသုံးပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဆံပင်ပေါ်မှာ ပေါင်းတင်ဆေးကိုအရင်လိမ်းပြီး ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနွေးနွေးလေးနှင့် ဆံပင်တွေကို လုံအောင်အုပ်ထားပါ၊ အချိန်ကတော့ သင့်ဆံကေသာအခြေအနေပေါ်မှုတည်ပြီး ထားပေးပါ။ ပြီးမှ ရေအေးအေးလေးနှင့် ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
ရှန်ပူနဲ့ လျှော်တဲ့အခါ ရေနွေးနွေးကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးကို ဆေးတဲ့အခါ ရေအေးကို အသုံးပြုခြင်းက ဆံပင်အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အဖျားကွဲတာတွေ၊ ဆံပင်ခြောက်သွေ့ပျက်စီးတာတွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အာဟာရအပို ရရှိချင်ရင်တော့ hair conditioner ထပ်သုံးပေးပါ၊ ဒါက သင့်ဆံကေသာကို ပိုပြီးတောက်ပ၊ ပျော့ပြောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ treatment ပြုလုပ်ခြင်းကို နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်ပတ်မှ တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုပါ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် သင့်ဆံပင်ကို ရှန်ပူနှင့် လျှော်ပြီးမှ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေး hair mask ကိုလိမ်းသင့်ပါတယ်နော်။